သခင်ယေရှုသည် ဘာကိုရည်ရွယ်၍ ဤသို့ပြောခဲ့သလဲ။ ''သခင်ယေရှုတပည့်တော်တို့အား ပြောပြ လိုသည်မှာ'' ငါအခုအဝေးကို သွားရတော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ပုံစံအသစ်ဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နဲ့ ငါပြန်လာမည်။ သင့်အထဲ၌ ငါလာရောက်နေထိုင်အသက်ရှင်မည်။ ခမည်းတော်သည် ငါ့၌ရှိသလို ငါသည်လည်း သင်တို့၌ရှိမည်။'' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုက ''ငါသည် ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည် ငါ၌ရှိသည်ကို၎င်း၊ ငါသည် သင်တို့၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊ ထိုနေ့၌သင်တို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။''ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည်။(ယော၊ ၁၄း၂၀)
သခင်ယေရှုစကားတော်ဖြစ်သော ''သင်တို့သည် ငါ၌ရှိသည်ကို၎င်း၊ ငါသည်သင်တို့၌ရှိသည်ကို ၄င်း'' ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့် အသစ်သောဆက်နွယ်တော်စပ်ခြင်း၌ သွင်ပြင် လက္ခဏာနှစ်ခုရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ဤအရာကို ရိုးရှင်းသောအချက် နှစ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။
၁. ယုံကြည်သူသည် ခရစ်တော်၌ ရှိသည်။
၂. ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူ၌ ရှိသည်။
ခရစ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသစ်သော ဆက်နွယ်တော်စပ်ခြင်း၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာနှစ်ခုကို စဉ်းစား ကြည့်ကြပါစို့။
ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ထဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့ကို တည်စေသည်။ ဤအရာသည် ဘုရားလုပ်ဆောင်သော အချက်ဖြစ်ပြီး ယုံကြည် သူတိုင်းတွင် အကျုံးဝင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့် သင်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌ တည်နေကြ၏''ဟု ဆိုသည်။(၁ကော၊ ၁း၃၀)
''ယေရှုခရစ်၌တည်သည်'' (In Christ) ဟူသော စကားလုံးနှစ်လုံးထက်ပို၍ တန်ဖိုးရှိသောစကားလုံး သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ သို့သော် ''ယေရှုခရစ်၌တည်သည်'' (In Christ) ဟူသော စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။
''ယေရှုခရစ်၌တည်သည်''ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ သခင်ယေရှုနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ အကြိမ်မွေးဖွားသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ဘုရားနှင့် တသားတကိုယ်ထဲ ဖြစ်သွားသည်။ သမ္မာကျမ်း စာက ''သခင်ဘုရား၌ မှီဝဲသောသူသည် ထိုသခင်နှင့် တစိတ် တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်၏'' ဟူ၍ ၁ကော ၆း၁၇ တွင်ဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်သောကြောင့် သူကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ပေး ခဲ့သောအရာများနှင့် သူ့ထံမှ အရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌တည် သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၌ ဘုရားသခင်၏ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်း နှင့် နှစ်သက်ခြင်း အကြောင်း ဖြစ်စေသည်။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏သားတော်ကို ချစ်ပြီး သားတော်၌ဝမ်းမြောက်သလို ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၌ ဝမ်းမြောက်ရ ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ တည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နည်းတူ ဤလောက၌ ဖြစ်ကြ၏။''ဟု ၁ယော ၄း၁၇ တွင်ဆိုထားသည်။
အလွန်ဆင်းရဲသော မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသော မိသားစုမှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ သူမသည် ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း သူမ၏မိသားစုမှာ အလွန်ဆင်းရဲသော ကြောင့် သူမ၏အနာဂါတ်မှာ မှုန်ဝါးလျက်ရှိသည်။ သို့သော် တစ်နေ့၌ အလွန်ချမ်းသာသော မင်းသားလေးသည် သူမကိုတွေ့ပြီး နှစ်သက်သွားသည်။ ထို့နောက် သူမနှင့်ချစ်ကြိုက်သွားပြီး သူ၏သတို့သမီးလုပ်ရန် သူမကို တောင်းဆိုသည်။
ဤအချိန်၌ သူတို့နှစ်ယောက်သည် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းဖြင့် ဆက်စပ်နွယ်လိုက်သည်။ ဤကောင်မလေးမှာ မဆင်းရဲတော့ပေ။ ချမ်းသာသော မင်းသားလေးနှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ဆက်နွယ်လိုက် သောကြောင့် သူ့ထံမှနှင့် သူ့ တွင်ရှိသောအရာများကို ကောင်မလေး သည် ဝေမျှယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်ဆက်နွယ်ထားသောကြောင့် ခရစ်တော်ထံမှ အရာများနှင့် ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ပေး ခဲ့သော အရာများကို ဝေမျှယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
''ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌တည်သည်''ကို ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ သေချာစွာ သိနိုင်မည်နည်း။ သမ္မာ ကျမ်းးစာက အသေအချာ ပြောထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခရစ်တော်၌တည်စေသူမှာ ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး သူ ထိုသို့လုပ်သည်ကို ကိုယ်တိုင် ပြောပြခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''သင်တို့နှင့်ငါတို့ကို ခရစ်တော်၌တည်စေ၍ ဘိသိက်ပေးသောသူကား ဘုရားသခင်ဖြစ်သတည်း''ဟု ဆိုခဲ့သည်။(၂ကော၊ ၁း၂၁)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌တည်ပြီး ခရစ်တ်ာနှင့်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ပေးခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အပိုင်းမှာ ထိုအရာကိုသိမြင်ရန် ယုံကြည်ရန်နှင့် ဝမ်းမြောက်ရန်ဖြစ်သည်။
၂. ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူ၌ ရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌တည်ပြီး ခရစ်တော်နှင့်တလုံးတဝတည်းရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ ကျွန်ုပ်သည် စုံလင်သော အဖြစ်၌ ရပ်တည်လျှက် (Perfect Standing) ရှိသည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကတော့ မည်သို့ဖြစ်မည် နည်း?
ဘုရားသခင်ကို ကျေနပ်နှစ်သက်စေသော အသက်တာမျိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်လိုသော်လည်း၊ မိမိဘာသာ မိမိဆိုလျှင်ထိုသို့ အသက်ရှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းသောအရာ၊ မှန်သော အရာကို လုပ်လိုသော်လည်း မှန်တာကိုလုပ်ရန်ပိုပြီး ရုန်းကန် လေလေ မှန်တာလုပ်ရန်ပိုပြီး ပျက်ကွက်လေ လေဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ တမန်တော်ပေါလုသည် ထိုပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သူက ''ငါသည် ကျင့်ချင်သော အကျင့်ကောင်းကို မကျင့်၊ မကျင့်ချင်သော အကျင့်ဆိုးကို ကျင့်၏။''ဟု ရော ၇း၁၉ ရေးသား ခဲ့သည်။
ခေတ်အဆက်ဆက်က ခရစ်ယာန်များသည်လည်း ပေါလုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မှန်သောအရာ၊ ကောင်းသောအရာကိုသာ ကျွန်ုပ် တို့ လုပ်ချင်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ။
ဤပြသနာကို ဘုရားသခင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ။ ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံး အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်အသက်ရှင်စေခြင်း အားဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''ထိုသို့ သင်တို့သည် သားဖြစ်သောကြောင့် အဗ္ဗ အဘဟု ခေါ်တတ်သော သားတော်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို သင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူ၏'' ဟု ဆိုထားသည်။(ဂလာ၊ ၄း၆)
ဘုရားသခင်၏ ရှင်းလင်းသောပြောကြားချက်ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံး အတွင်း၌ အသက်ရှင်နေထိုင်လျက် ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။
ဂလာတိ ၂း၂ဝ တွင် ပေါလုက ''ငါသည် အသက်ရှင်သေး၏။ သို့သော်ကိုယ်တိုင်မရှင်၊ ခရစ်တော်သည် ငါ၌ ရှင်တော်မူ၏'' ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကောလောသဲ ၁း၂၇ တွင် ပေါလုက ''ဘုန်းအသရေကို မြှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟူသော သင်တို့အထဲ၌ တည်တော်မူသော ခရစ်တော်'' ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည်။
''သူ၏သားသမီး တစ်ယောက်စီ၏ စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ အသက်ရှင်တော်မူသော ခရစ်တော်နေထိုင် လျက်ရှိသည်'' ဟူသော အမှန်တရားကို ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အလွန်အမင်း သိစေလိုသောကြောင့် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌ ခဏခဏ ရည်ညွှန်း ပြောဆိုထားသည်။ ရှင်ပေါလုက (ယေရှုခရစ်သည် သင်တို့၌တည်တော်မူသည်ဟု ကိုယ်အကြောင်းကို ကိုယ်မသိကြသလော)ဟု ဆိုသည်။ (၂ကော၊ ၁၃း၅)။ ရှင်ပေါလုက ယုံကြည်သူအတွက် ဆုတောင်းသည်မှာ (ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် သင်တို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူမည့်အကြောင်း၊) ဟူ ၍ ဖြစ်သည်။ (ဧဖက်၊ ၃း၁၇)
တခါတရံ ခရစ်ယာန်များသည် သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ခရစ်တော်ရှိသည်ကို ယုံကြည်ရန်ထက် အချို့သော အထူးထူးသော စိတ်ခံစားမှု သို့မဟုတ် စိတ်လှုတ်ရှားမှုများကို ရှာဖွေတတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က သူ၏သားသမီးအယောက်စီတိုင်း၏ စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ ခရစ်တော် အသက်ရှင်နေထိုင်သည်ဟု ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင် ဘုရားသခင် ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပင် ခံစားရသည်ဖြစ်စေ သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော် ထဲတွင် ဘုရားပြောထားသောအရာသည် မှန်ကန်သည်။
ခရစ်တော် သင့်အတွင်း၌နေသည်ဟူသော ဘုရားသခင်၏ပြောဆိုချက်ကို လက်ခံပါ။ ဤအရာသည် မှန်ကန်သည်ကို ယုံကြည်ပါ။ ဘုရားသခင်က ပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့်၏ စိတ် ခံစားမှုက မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤအရာသည် မှန်ကန်သည်ကို ယုံကြည်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သောအရာအားလုံးကို ခရစ်တော်အားဖြင့်ရသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယခင် သင်ခန်းစာတွင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ကြီးမြတ်သော “ ငါ ဖြစ်သည်” ( I AM ) ဟူသည်ကို သိရှိ ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ လိုသောအရာအားလုံး၏အဖြေ ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှု၊ တန်ခိုး၊ ဥာဏ်ပညာ၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ခွန်အားစသည်တို့ ဖြစ်ရုံမက သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သော အရာအားလုံးသည် သူ၌ တည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ “အလုံးစုံတို့၏အလုံးစုံ” သည် အမှန်တကယ်ပင် သူ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဤအရာများကို ကျွန်ုပ်က မည်သို့ရရှိခံစားနိုင်ပါသနည်းဟု သင်မေးလိမ့်မည်။ ခရစ်တော် ၌''တည်''ခြင်းအားဖြင့် ရရှိခံစား နိုင်သည်။ သခင်ယေရှုက ''ငါ၌တည်ကြလော့။ သင်တို့၌လည်း ငါတည်မည်'' ဟုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပိုင်းမှာ သူ၌ တည်ရမည်။ သူ၏ အပိုင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သောအရာအားလုံး သူ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌တည်ခြင်း ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခရစ်တော်အထဲ၌ ထားရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ခရစ်တော်၌ တည်စေလို သည်။ ခရစ်တော်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်သောအခါမျှ မပြောဆိုခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောသည်မှာ ''ငါ၌တည်နေကြလော့'' (ယော ၁၅း၎) ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ''တည်နေကြလော့'' ဟူသော စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ''နေရန်'' ဖြစ်သည်။ သင့်အိမ်သို့ သင်သွား၍ ထိုနေရာ၌ တည်နေကြလော့ ဟု ဆိုလျှင်၊ သင် ထိုနေရာမှာ နေသည် ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏အိမ်၌ သင်ရှိနေသောအခါ အိမ်တွင်ရှိသော လျှပ်စစ်မီး၊ အပူပေးစက်၊ ပရိဘောဂများ၊ အစားအစာနှင့်အရာအားလုံးသည် သင့်အတွက်ပင်ဖြစ်ပြီး သင်ရယူ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခရစ်တော်၌ သင်တည်မည်ဆိုပါကလည်း ခရစ်တော်၌ ရှိသော သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ခွန်အား၊ သည်းခံခြင်း၊သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဥာဏ်ပညာ အစရှိသောအရာများနှင့် အရာအားလုံးသည် သင့်အတွက် ဖြစ်ပြီး သင်ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။
ခရစ်တော်၌တည်ခြင်းက ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဆိုလိုရင်းမှာ ချိုးဖေါက်ခြင်းမရှိသော မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းမျိုးဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ တည်နေနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၌ သူ ရှိနေုခြင်းကို သိမှတ် လက်ခံခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သူ့စကားကို နားထောင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက် သူ့ထံသို့ ချဉ်းကပ်ခြင်း အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သူ၌တည်နေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်တော်၌တည်နေခြင်းကို ဘယ်အရာက ချိုးဖျက်သနည်း။ အဖြေမှာ''အပြစ်'' ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် လုပ်မိသည့် အခါ ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်တော်၌တည်ခြင်းသည် ကျိုးပျက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကို ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်သောအခါတွင်မူ၊ သူနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို ပြန်လည်ရရှိ သည်။ သူ၌ကျွန်ုပ်တို့ပြန်၍ တည်နိုင်သည်။
ဘုရားသခင်၏ လူ့ (Evan Hopkins) သည် ''ခရစ်တော်၌တည်ခြင်း'' ၏အဓိပ္ပာယ်ကို သူ၏ခြောက်နှစ် အရွယ် သားငယ်ကို တစ်ခါက ရှင်းပြခဲ့သည်။ သားငယ်လေး Little Evan သည် အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ်၌ပင် ခရစ်တော်ကို သူ၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံခဲ့သည်။ အဖေဖြစ် သူသည် ခရစ်တော်၌ တည်ခြင်းဆိုသည့် သမ္မာတရားကို သူ၏သားအား နားလည်စေချင်ခဲ့သည်။
သူ၏သားကို ရုံးခန်းအတွင်းသို့ခေါ်၍ ကဒ်တစ်ခုကို ထုတ်လိုက်ပြီး စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲလိုက် သည်။ စက်ဝိုင်းအတွင်း၌မူ ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးသောအရာများဖြစ်သော ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်မြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း စသည့်တို့ကို တန်းဆီ၍ ရေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် စက်ဝိုင်းအလယ်တည့်တည်ကို ခဲတံဖြင့်ထောက်၍ ''ခဲတံကို တွေ့တယ်မဟုတ်လား။ သား..ခဲတံစက်ဝိုင်းထဲမှာ ရှိသလို ငါမင်းကိုလည်း ခရစ်တော်အတွင်း၌ ရှိစေချင်တယ်။ အထဲမှာဆို မင်းကို ပျော်ရွှင်အောင်၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းအောင်၊ နာခံမှု ရှိအောင် မင်းကိုလုပ်ပေးမယ်။ အားလုံးသောအရာတို့ကို မင်းရှာဖွေတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် စက်ဝိုင်းရဲ့ ဘေးပတ်လည်မှာ တံခါးသေးသေးလေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ မင်းအဲဒီတံခါးပေါက်လေးတွေထဲကနေ အပြင်ကို ထွက်တဲ့အခါ မင်းဆိုးသွမ်းသွားလိမ့်မယ်''ဟူ၍ သူ၏သားငယ်ကို ပြောလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူသည် စက်ဝိုင်း၏ဘေးပတ်လည်တွင် အပြင်သို့ထွက်ရာ တံခါးသေးသေးလေးတွေကို ဆွဲလိုက်သည်။ ထိုတံခါးလေးများသည် ခရစ်တော်၌တည်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို သွေဖယ်စေမည့်အပြစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အီဗန်လေးသည် ဤအရာကို နားလည်ရသည့်အတွက် အလွန်ပင်ပျော်ရွှင်၍ အခြားသူတို့အား သူနားလည်သော ဘာသာစကားဖြင့်ပြန်လည် ပြောပြခဲ့သည်။ ခရစ်တော်၌ တည်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကို သူတပါးတို့အား ရှင်းပြရန်နှင့် စက်ဝိုင်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် သူရှိနေကြောင်းကို ရှင်းပြရန် ထိုကဒ်ကလေး ကို အမြဲတစေ ယူဆောင်သွားလေ့ရှိသည်။
တစ်နေ့တွင် အီမန်လေးသည် သူအဖေထံသို့ ငိုယို၍ပြန်လာသည်။ ဘာကြောင့်ငိုနေလဲဆိုတော့ သူ့အဖေမေးသောအခါ၊ အီဗန်လေးက ''စက်ဝိုင်းထဲကနေ ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မိပြီ'' ဟုပြန်ဖြေလိုက်သည် ပြန်ဝင်၍မရမည်ကို အီဗန်လေးကြောက်နေသည်။
ဖခင်က သူသည် သားငယ်လေးနှင့်အတူ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး ကဒ်ကိုအတူတူကြည့်ကြသည်။ ဖခင် က ''ကဲအခု မင်း ထွက်သွားတဲ့ တံခါးပေါက်က ဘယ်အပေါက်လဲ။ ပြောပါအုံး။ အီဗန်လေးသည် ထိုတံခါး ပေါက်ကို ပြလိုက်သည်။ ထိုအခါ အဖေက ''ကောင်းပြီ၊ ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင် မင်းထွက်သွားတဲ့အပေါက်ကနေ ပဲပြန်ဝင်ရမယ်။ တနည်းအားဖြင့် မင်းရဲ့အပြစ်တွေကို ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းအားဖြင့် ပြန်ဝင်ရမယ်။ ငါတို့အဲဒီလိုလုပ်တာနဲ့တပြိုင်နက် ငါတို့ရဲ့အပြစ်ကို ဘုရားသခင်က ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး ငါတို့ လည်း စက်ဝိုင်းထဲကို ပြန်ဝင်နိုင်ပြီး ခရစ်တော်၌ တဖန်ပြန်ပြီး တည်နိုင်တယ်''ဟု သားငယ်ကို ရှင်းပြ သည်။ အီဗန်လေးသည် ဤအမှန်တရားကို သင်ယူ သိရှိခွင့်ရသည့်အတွက် မည်မျှပျော်ရွှင်မည်နည်း။
ဤအဖြစ်အပျက်သည် ရိုးရှင်းသော်လည်း ''ခရစ်တော်၌တည်ခြင်း'' ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမူ ကောင်းကောင်းရှင်းပြနိုင်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ တည်ရှိမှုကို လက်ခံလျှင်၎င်း၊ သူ၏စကားကို နာခံလိုက်နာလျှင်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် သူထံသို့ ချဉ်းကပ်လျင်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၌တည်၍ သူနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌၄င်း၊ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌၄င်း ဝမ်းမြောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်လုပ်မိပါက ထိုအပြစ်ကို ဘုရားသခင်ထံ ချက်ချင်း ဝန်ချတောင်းပန်သင့်သည်။
ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ အကြီးမားဆုံး လျှို့ဝှက်ချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်လုပ်မိ သည့်အခါ ဘုရားသခင်ထံ ချက်ချင်း တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့မလုပ်ရန် စာတန်သည် ကျွန်ု့တို့ ကို တားဆီးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ချက်ချင်းဝန်ချတောင်းပန်စေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤသို့ လုပ်သည် နှင့် တပြိုင်နက် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်တော်၌ တဖန်ပြန်၍တည်ကြသည်။
သခင်ယေရှုက ''ခမည်းတော်အားဖြင့် ငါ အသက်ရှင်၏''ဟု ဆိုသည်။ ယေရှုက ဘာကိုဆိုလိုသနည်း သူဆိုလိုခြင်းမှာ ''ခမည်းတော်သည် ငါ့အတွင်း၌နေပြီး ငါသည်သူအားဖြင့် အသက်ရှင်သည်။ ငါ့စိတ်နှလုံး အတွင်း၌ သူရှိမှုကို ငါအသိအမှတ်ပြု၍ သူ၏စကားကို ငါအမြဲနားထောင်ရုံမက ငါလိုအပ်သည့်အရာများ အတွက် သူထံသို့ချဉ်းကပ်တောင်းခံသည်''ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ့အတွင်း၌ အသက်ရှင် နေထိုင်သော ခမည်းတော်အားဖြင့် အသက်ရှင်သလို ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ အသက်ရှင် နေထိုင်လျှက်ရှိသော ခရစ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ'' ဖြစ်၏ဟုဆိုသည်။
တမန်တော်ပေါလုသည် ခရစ်တော်က သူ၏ဘဝဖြစ်သည်ကို နားလည်သွားသည့်အခါ ''ငါသည် ကျင့်ချင်သောစိတ်ရှိသော်လည်း၊ ကောင်းစွာကျင့်တက်သောအခွင့်ကို ရှာ၍မတွေ့နိုင်'' ဟူ၍ နောက်ထပ် ပြောစရာမလိုတော့ပေ။ ယင်းသို့ပြောသည့်နေရာ၌ ''ငါ့ကို ခွန်အားဖြင့် ပြည့်စုံစေတော်မူသော ခရစ်တော်အား ဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါတက်စွမ်းနိုင်၏''ဟု အောင်နိုင်သောစိတ်နှင့် ပေါလုဆိုခဲ့သည် (ဖိ၎း၁၃)။
အောက်ပါအရာ (၃)ခုကို ယခု စတင်၍ သင်ပြုလုပ်ပါ
(၁) ခရစ်တော် သင့်စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ရှိသည်ကို အသိအမှတ်ပြုပါ။
ခရစ်တော်ကျွန်ုပ် (စိတ်နှလုံး)အတွင်း၌နေသည်။ ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်(စိတ်နှလုံး) အတွင်း၌နေသည် ဟုသင့်ကိုသင် ပြောပါ။ ခရစ်တော်သည် သင့်အတွင်း၌ အမှန်တကယ်နေသည်။ သူသည် သင့်အတွင်း ၌ရှိပြီး သူ၏အလိုတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးရန် စတင်လျှက် ရှိသည်။ သင့်အတွက်အရာရာတို့ ကို အစစ်အမှန်ဖြစ် လာစေရန် ဘုရားက ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။
ဖြားယောင်သွေးဆောင်မှုကို ကျော်လွှားရန် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့သည်ဟု ကောင်းမလေးတစ်ယောက်က တစ်ခါတွင် ဆိုခဲ့သည်။ သူမက ''မာနတ်သည် သူ၏နှလုံးသားတံခါးကို လာခေါက်သောအခါ သခင်ယေရှုကိုသွားဖွင့်ခိုင်းခဲ့သည်။ မာနတ်သည် သခင်ယေရှုကိုတွေ့ သောအခါ နေရာ မှားပြီးလာမိတာပါဟု ခေါင်းငုံ့၍ပြောပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။ ဤကောင်းမလေး ဘာကိုဆိုလို၍ ဤသို့ပြောသနည်း။ သူမရိုးရှင်းစွာပင် ဆိုလိုသည်မှာ ''သခင်ယေရှုသည် သူမ၏စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ရှိသည်ကို အသိအမှတ်ပြု၍ သွေးဆောင်မှုကို အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှာနိုင်ရန် သခင်ယေရှုကို အားကိုးအားထားပြုခဲ့ သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ရမည့် အရာလည်းဖြစ်သည်။
(၂) အချိန်တိုင်း သူ့ကိုနာခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ချစ်ခြင်း၊ ရိုသေခြင်း၊ နားခံခြင်း မရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းရှိ ခရစ်တော်ကို ဝမ်းမြောက်စေနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ''သခင်ယေရှု၊ ကိုယ်တော် နှစ်သက်စေသောအရာကိုသာ ကျွန်ုပ်ပြုမည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းဖြင့် အခြားသောသူ များ ကျေနပ်ခြင်းကို မဖြစ်စေသော်လည်း ကိုယ်တော်ကိုသာ ကျွန်ုပ် ကျေနပ်စေမည်။”ဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောရန် အမြဲတမ်း အဆင်သင့် ဖြစ်ရမည်။
(၃) သင်လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက် သူ့ထံကိုချဉ်းကပ်တောင်းခံပါ။
သင်ဘာပဲလိုလို၊ သင်လိုသောအရာသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟု သိမှတ်လိုက်ပါ။ သူသည် ကြီးမြတ်သော (ငါ ဖြစ်သည်)ဟု ဆိုသော သူ ဖြစ်သည်ကို သတိရပါ။ သင်၏အောင်မြင်ခြင်းအတွက် သူ့ ကို ဆွဲကိုင်ပါ။ သင့်ကိုယ်စား သွေးဆောင်မှုကို ကျော်လွှားရန် သူကို အခွင့် ပေးလိုက်ပါ။ သူဘယ်တော့မှ သင့်ကို ကျရှုံးစေ မည်မဟုတ်ပါ။
ခရစ်တော်၌ တည်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိကိုယ်ကို ခရစ်တော်(ငါ ဖြစ်သည်)ဟု ဆိုသော သူ ထံ ပေးအပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ထိန်း ရန် သူ့ကို အခွင့်ပေးခြင်းနှင့်၊ ကိစ္စများကိုသူ့ကို အားလုံး လုပ်ခွင့်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်၌ တည်ပါက သူသည် အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၌ သူပြုလုပ်ပေး လိမ့်မည်။ သူသည် ကြီးမြတ်သော (ငါ ဖြစ်သည်)ဟု ဆိုသော သူ ဖြစ်သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၌ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာပဲလိုလို ကျွန်ုပ်တို့လို သောထိုအရာသည် သူ ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်၌တည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ် နေ့တိုင်း သင်ယူခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအတွက် သူအား ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို ခံရပေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်၏သားတော် ပုံဏ္ဍာန် အညီ ပြောင်းလဲခြင်း”ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သခင်ယေရှုနှင့် ပို၍ပို၍တူလာသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့၌ သခင်ယေရှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ တွေ့ကြရမည်ဖြစ်ပြီး သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ သည် အရာရာ၌ တူလာမည် ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန် အသက်တာသည် ခရစ်တော်၏အသက်သည် ကျွန်ုပ်၌ သူ အသက်ရှင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
၁။ သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်သွားပြီးနောက် တပည့်တော်များထံသို့ ပြန်လာရာတွင်...
(က) တပည့်တော်၏ စိတ်ကူးအတွေးထဲ၌သာ ပြန်လာသည်။
(ခ) သူမသေခင်က သူ၌ရှိသောလူ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးဖြင့် ပြန်လာသည်။
(ဂ) တပည့်တော်များ စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ အသက်ရှင်ရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အနေဖြင့် ပြန်လာသည်။
၂။ ခရစ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသစ်သောဆက်နွယ်တော်စပ်ခြင်း၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာနှစ်ခုမှာ -
(က) ယုံကြည်သူသည် ခရစ်တော်၌ရှိပြီး ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူ၌ရှိသည်။
(ခ) ယုံကြည်သူသည် ခရစ်တော်နှင့်ဆင်တူပြီး ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူနှင့် ဆင်တူသည်။
(ဂ) ယုံကြည်သူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူရှိ၍ ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူနှင့်အတူရှိသည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်တော်၌ ရှိသည်ကို
(က) တစုံတခု ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့်။
(ခ ) တစုံတခု ဘုရားသခင်က ပြု လုပ်ပေးခြင်းကြောင့်။
(ဂ ) တစုံတခု ၌ ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ရမည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်တော်၌ ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ချနိုင်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ....
(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
(ခ ) အတွေ့အကြုံကောင်းများ ကျွန်ုပ်တို့၌ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
(ဂ ) သမ္မာကျမ်းစာက ပြောထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၅။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ အသက်ရှင်နေထိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသည့် အကြောင်းမှာ ...
(က) ခရစ်တော်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ အသက်ရှင်နေထိုင်သည်ဆိုသည့် ဘုရားသခင်၏ ရှင်းလင်း သော ပြောကြားချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
(ခ ) ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ စိတ်မှာ တစစ်စစ်ခံစားနေရ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
(ဂ ) ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားကျောင်းတက်၍ ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၆။ ခရစ်တော်၌ရှိသောအရာတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခံစားရခြင်းမှာ ...
(က) ခရစ်ယာန်ကောင်းများကဲ့သို့ဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
(ခ ) ဘုရားကျောင်းတက်၍ဖြစ်သည်။
(ဂ ) ခရစ်တော်၌တည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၇။ ခရစ်တော်၌တည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ...
(က) မပျက်စီးသော မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းမျိုးဖြင့် သူနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(ခ ) ခရစ်တော်အတွင်းသို့ ဝင်ရန်ကြိုးစားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(ဂ ) ဘာသာရေး အလွန်းကိုင်းရှိုင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
၈။ ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ တည်ခြင်းသည် ကျိုးပျက်သွားသည့်အချိန်မှာ ...
(ခ ) ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားသည့်အခါ။
(ဂ ) ပြဿနာကြီးများပေါ်လာသောအခါ။
၉။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်လုပ်မိသည့်အခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ...
(က) အပြစ်လုပ်မိတာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို အတန်ကြာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမှ သူ့ထံသို့ လာစေလိုသည်။
(ခ ) သူ့ထံသို့ အပြစ်များကို ဝန်ချမတောင်းပန်မီ ခဏစောင့်ဆိုင်းစေလိုသည်။
(ဂ ) အပြစ်ကို ချက်ချင်း ဝန်ခံတောင်းပန် စေလိုသည်။
၁ဝ။ အောက်ပါအရာကို လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်၌ တည်သည်။
(က) အခြားဘာမှမလုပ်ဘဲ သူ့အကြောင်းကို အချိန်တိုင်းတွေးတော်ခြင်းအားဖြင့်။
(ခ ) ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ သူရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သူ့ကိုနာခံခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် သူ့ထံချဉ်းကပ်
(ဂ) ကောင်းနိုင်သမျှကောင်းအောင် ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်။
ဤ သင်ခန်းစာ၌ သင်သည် သင်ယူရရှိခဲ့သော အရေးကြီးဆုံးအချက်ကား အဘယ်နည်း။